Akhriso: Puntland oo shuruud culus ku xirtay ka qeyb galka Shirka Dhuusamareeb 3 - Jowhar Somali news Leader
Home News Akhriso: Puntland oo shuruud culus ku xirtay ka qeyb galka Shirka Dhuusamareeb...
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa soo saartay mowqifkeeda ku aadan Shirka Dhuusamareeb 3, iyadoo ku xiray ka qeyb galka shirkaas.
War saxaafadeed goor dhow ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay kulankii shalay ee Golaha Shacabka uu ahaa mid marin habaabin ku ah dadaalada dowlad goboleedyada ku doonayaan in si isla ogol looga shaqeeyo qabsoomida doorashada dalka ee 2020/21.
Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in qabsoomida shirka Dhuusamareeb 3 ay ka horeyso hubinta in lagu gaarayo heshiis saldhig u leh, sidaas darteed shirku uu noqdo mid ka qeyb galkiisa ay u dhan yihiin Madaxda dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo Diblomaasiyiinta Beesha Caalamka.
Waxaa kaloo loogu baaqay Madaxweynaha inuu soo magacaabo Ra’iisul Wasaare qeyb ka noqda fulinta heshiisyada qabsoomida doorashooyinka dalka ee 2020/21.
Dowladda Puntland ayaa sheegtay inay muhiim u aragtaa ka qeyb galka shirka Dhuusamareeb 3 Beesha Caalamka si ay damaanad qaad ugu noqdaan hirgelinta natiijada shirka, taas oo la’aanteed keeni karta in natiijada shirkaas aan loo fulin sidii loogu heshiiyay.